Umaka: ukubuyekeza kwe-google | Martech Zone
Umaki: ukubuyekezwa kwe-google
Ungazakha Kanjani izixhumanisi Zokubukeza ze-Google, i-Bing, i-Yelp, nokuningi…
NgeSonto, ngoJuni 4, i-2017 NgeSonto, ngoJuni 4, i-2017 Douglas Karr
Indlela esemqoka yokuthuthukisa izinga lakho cishe kunoma iziphi izilinganiso nokubuyekezwa kwesayithi noma usesho lwasendaweni ukuthola ukuthwebula kwamuva, okuvamile, nokuvelele. Ukuze wenze lokho, kufanele ukwenze kube lula kumakhasimende akho, noma kunjalo! Awufuni ukubacela nje ukuthi bakuthole kusayithi bese bebeka isibuyekezo. Ukufuna inkinobho yokubuyekeza kungakhungathekisa. Ngakho-ke, indlela elula yokubamba lezo zibuyekezo yile